आँचल र डा. उदिपको विवाहमा करोडौं खर्च, ह्यातमा आज भव्य रात्रिभोज - Filmy News Portal Of Nepal
चर्चित नायिका आँचल शर्मा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । पेशाले चिकित्सक रहेका डा. उदिप श्रेष्ठसँगको करिब दुई वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई उनले वैवाहिक जीवनमा परिणत गरेकी छिन् । काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठस्थित् पार्क भिलेज रिसोर्टमा भव्य समारोहका बीच उनीहरुको विवाह भएको हो ।
निकै तामझाम गरेर विवाह गरिएको थियो । आँचललाई उनका पतिले करोडौंका गरगहनासमेत उपहार दिएकोबारे अहिले ईण्डष्ट्री तातेको छ । कतिसम्म भने उक्त विवाह समारोहमा सरिक भएकाहरु नै तामझाम देखेर छक्क परेका थिए ।
चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ४’बाट चलचित्र क्षेत्रमा उदाएकी यी सुन्दरी म्यूजिक भिडियोको दुनियाँमा अझ बढी सफल मानिन्छिन् । आँचल र उदिपले आज आयोजना गरेको रात्री भोजमा भिआईपीदेखि चलचित्रकर्मीहरु निम्ता गरेका छन् ।